Tsindron’antsy 46 no nahazo ity tovovavy ity ka ny 4 tamin’ireo no nahazo ny taova tany anatiny. Nilentika ny tratrany ary tsy maintsy nijanona tapa-bolana tany amin’ny hôpitaly i Shannon, noho ny fitsaboana azy. Nampidirina am-ponja kosa i Michael, vadiny. Na teo aza izany rehetra izany dia namela tanterakaan’ ity vadiny ity i Shannon. Miandry ny fotoana hivoahan’io vadiny io ny fonja izy ankehitriny ary hiteraka izy ireo.